SmCo Magnet - Shiinaha Ningbo Sine
SmCo Magnet waa qarni labaad ee dhulka dhif magnet-joogto ah, waa magnet joogto ah-awood sare ka SM, Co, Fe iyo xubno kale oo bir ah raad dhigay. Ka sokow heerkulka a max ka shaqeeya 300 ℃, waxa uu leeyahay iska caabin ah la taaban karo ka dhanka ah daxalka iyo qayilo. Sidaa awgeed, waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo in Cirka iyo meel warshadaha aomng dadka kale. Manufactures magnet SmCo5 iyo Sm2Co17 muuqaalo kala duwan. macaamiisha badan ayaa u baahan fasalada YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, iwm Machining waxaana dulqaadka ...
SmCo Magnet waa qarni labaad ee dhulka dhif magnet-joogto ah , waa magnet joogto ah-awood sare ka SM, Co, Fe iyo xubno kale oo bir ah raad dhigay. Ka sokow heerkulka a max ka shaqeeya 300 ℃, waxa uu leeyahay iska caabin ah la taaban karo ka dhanka ah daxalka iyo qayilo. Sidaa awgeed, waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo in Cirka iyo meel warshadaha aomng dadka kale.
Manufactures SmCo5 iyo Sm2Co17 magnet muuqaalo kala duwan. Macaamiisha badan ayaa u baahan fasalada YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, iwm
Waxaan ku gaari size waji leh iyo dulqaad by jarida ama la abrasives super shiidi. Samarium Cobalt (SmCo) oo aan la dhulka karaa qodista caadiga ah, jeestay ama hababka axdi qarameedka, iyo waa in la machined ka hor ay yihiin magnetized. Intaa waxaa dheer, kiniisadaha oo weyn ama adag waxaa sida caadiga ah magnetized ka hor shirka. dulqaadka Standard for magnet Cobalt Samarium waa +/-. 005 "ee dhinacyada dhulka. Waxaan kaydka magnet SmCo in block, giraanta oo qaab disc ee kala duwan ee tirada iyo fasalada, iyo waxa aan si buuxda u qalabaysan in ay soo saaraan xajmiga iyo dulqaad in aad u baahan tahay.
wax 5 daawaha: 1
1: 5 waxay bixisaa 16 MGOe (wax soo saarka tamarta) 22 MGOe oo waxaa kor loogu dhigay ilaa 50% iyo 50% samarium Cobalt. 1: 5 taxane uu leeyahay ugu badnaan heerkulka a talinayaa hawlgalka 250 ° C. SmCo 1: 5 magnet u baahan hoose xoogga beerta ka badan 2:17 qalabka si magnetize. Mararka qaarkood, 1:15 wax la magnetized laga yaabaa in la ulo badan, ay shardi tahay in kulan magnetizing waa la heli karaa.
wax 2:17 daawaha
2:17 bixisaa 24 MGOe 32 MGOe oo ka kooban yahay 25% samarium, 5% copper, 18% bir ah, 2% hafnium ama zirconium, inay Cobalt ka dhiman. The 2:17 taxane ah oo uu leeyahay heerkul ah hawlgalka ugu badnaan 350 ° C. fasalada gaarka ah ee 2:17 waxaa laga heli karaa oo shaqeyn karaan in ay xitaa heerkul ka sareeya. SmCo 2:17 baahan yahay beeraha ay aad u sarayso magnetizing, iyo magnetization pole badan suurtogal ma aha.
Open iyo download Technical Data of SmCo Magnet
Hantida magnetic Basis
Aasaaska Property magnetic:
heerkulka shaqada ugu badan: 250-350 ° C
ugu Energy Product: (Bhmax) (15-35 MGOe)
Heerkulka ugu Working: (Temp.Tw) 250-350
Induction qasabka Force: (Hcb) 4-12 (Koe )
magnetism haraaga: br 0.8-1.2 (T)
Wehliyaha heerkulka karo ee magnetism haraaga ah (br) -0.04 - -0,01
1. Coercity Wanaagsan
2. heerkulka Nice Stability
3. Sababo la qiimaha dareenka of Cobalt, qiimihiisa waa mid qaali ah oo ay fududahay in la is beddelid
Hab-soo-saarka ee Samarium Cobalt Magnet Joogtada ah:
geeddi-socodka Powder → riixayo Sintering → → hantida magnetic → imtixaanka goynta → waxyaabaha dhamaystirtay
qalabka Cobalt Samarium caadi baaraandegi xaalad un-magnetized, la wheel u shiiddo diamond oo sii darane qoyan wanaagsan, taas oo lagama maarmaan ah. Sababtoo ah ee heerkulka alaabeed hooseeyo, Cobalt samarium waa in aan si buuxda u qalalan. Just dhimbiil yar ama koranto ma guurto ah ee wax soo saarka si fudud u keeni kara dab, heerkulka oo aad u sarreeya, taas oo ay adag tahay in la xakameeyo.
Khataraha ugu waaweyn:
magnet Cobalt Samarium waa debcaan. Fadlan si naxariis leh loo ilaaliyo indhaha, oo farihiisa gacmeed iyo jidhka marka iyaga la qabashada.
matoorrada waxqabadka sare
kala duwanaanshaha u dhexeeya magnet SmCo iyo magnet Sintered NdFeB inta badan waxaa ka mid ah qodobbada soo socda:
1. ciidanka magnetic
magnet joogto ah Neodymium waa ka xoog badan magnet SmCo in ciidamada magnetic.
(Outreach) Max of NdFeB sintered waa ilaa 53MGOe, halka (Outreach) Max ee wax SmCo waa 32MGOe.
Wax SmCo xoog ku adkaysato demagnetization badan wax NdFeb.
2. iska caabin heerkulka sare
NdFeB ma aha ka xoogbadan, sida SmCo in iska caabin ah heerkulka sare. Heerkulka shaqada ugu badan ee NdFeB waa 200 ℃ iyo in SmCo waa ilaa 350 ℃.
3. daxalka iska caabin ah
magnet NdFeB ma aha sidaas wanaagsan ee adkaysato qayilo iyo daxalka. Guud ahaan waxay leeyihiin in laga ilaaliyo by dahaadhay ama xataa xirxirida vacuum. Noocyada caadiga ah ee daahan ka mid ah zinc, nickel, epoxy iyo kuwa kale. Magnet SmCo aan la abuurmeena aan dahaadhay.
4. Qaab, processing iyo isu geynta
NdFeb iyo SmCo waa wax jilicsan labadaba, si ay u aan la-macmalay karo by processing goynta caadi ah.
Habka processing guud waa goynta silig koronto-iyo goynta wheel diamond. Haddaba sidaas daraaddeed ayaa muuqaalo producible magnet kuwanu waa xaddidan. Muuqaalo aad u adag ma aha la shaqayneyo. Xad hadlayay, wax SmCo waa ka jilicsan oo ka badan si fudud u jaba. Sidaa darteed, fadlan aad uga taxadirtaa in geynta iyo isticmaalka magnet SmCo.
A dhowr sano ka hor, qiimaha magnet SmCo laba jeer ama wax ka sii badan in magnet NdFeB ahaa.
Sanadihii la soo dhaafay, qiimaha NdFeB ayaa si weyn u kacay ay sabab u tahay tallaabooyin lagu xakamaynayo Country ee dhif-dhulka macdanta. Asal ahaan, magnet NdFeB caadiga ah waa ka raqiisan yihiin Cobalt samarium.
Heerkulka sare ee Magnet